I-DZH Ukupheka amalahle I-boiler yamkela izinto zokuhambisa ubushushu eziphezulu - imibhobho echetyiweyo, kunye nenqanaba elifanelekileyo lokuhamba kweflue, ukusebenza kakuhle kwe-boiler kungaphezulu kwemigangatho yobungcali kazwelonke 6 ~ 8%
Umgqomo wamanzi ashushu eDrum enye
I-DZL uthotho lwamanzi kwibhoyila eshushu yamanzi yamkela isiseko setyhubhu; phucula inqanaba lokhuseleko lamandla, ilungu elenziwa lula le bracing.
I-Chain Fix Chain Chail Amalahle e-boiler evuthayo ayakusebenza ngesandla ukondla amalahle kwaye ilungele iindidi ezininzi zexabiso eliphantsi.
I-Biomass Hot Boiler yaManzi
I-Biomass eshushu ibhoyila yaManzi ngumbhobho wamanzi wamanzi ojikeleze emva-umva ombane. Amafutha anokuba yi-Biomass, amalahle, iinkuni, irayisi, iigobolondo, iipellets, i-bagasse, inkunkuma njl.
I-Wood Biomass Boiler
I-Wood Biomass boiler yiwelding eneemoto ezintathu zasemva ngasemva zombhobho womlilo. Amafutha kwibhoyila angasetyenziswa ngeplanga leplanga, ilogi yomthi kunye nokudibanisa nezinye i-biomass kunye namalahle.
Inkonzo yeTekhnoloji yoFakelo iya kubonelelwa yiXUZHOU DOUBLE Rings MACHINERY CO., LTD ukugcina imveliso yethu ikumgangatho olungileyo.
Amalahle e-Boiler e-Boomass Boiler Chimney
I-chimney sisakhiwo esibonelela umoya wokuphefumla komsi oshushu okanye umsi ovela kwi-boiler, kwisitovu, kwiziko lomlilo okanye kwindawo yomlilo.
Itshimini ihlala ime nkqo, okanye ikufutshane ngokuthe nkqo kangangoko kunokwenzeka, ukuqinisekisa ukuba iigesi zihamba ngokutyibilikayo, zitsala umoya kwinto eyaziwa ngokuba kukutshisa itshimini okanye itshimini.
Igubu kabini leBoiler yaManzi aShushu
I-Double Drum Hot Water Boiler I-SZL Series edibeneyo yombhobho wamanzi ithatha i-boit ye-longitudinal ephindwe kabini yedrum.